Iindaba -Ingxelo yeHlabathi yeGlasi yeFayibha yeGlasi yeGlasi iveza imeko zangoku zeshishini, izinto ezintsha kunye nedatha yokuqikelela
Fibreglass ngqo ezihamba
Imisonto yeFiberglass equnyiweyo
Fibreglass Inaliti Mat
Ingxelo yeMakethi yeFayibha yeGlass yeGlass yeHlabathi ibonisa iindlela zangoku zeshishini, izinto ezintsha, kunye nedatha yokuqikelela yeemarike
Le ngxelo ibonelela ngombono oneenkcukacha zeshishini leFiber Glass Mesh ngokusekwe kubungakanani bemakethi, ukukhula kweFiber Glass Mesh, izicwangciso zophuhliso kunye namathuba. Ulwazi lwentengiso kuqikelelo, uhlalutyo lwe-SWOT, izoyikiso zeFiber Glass Mesh, kunye nezifundo ezinokubakho zizinto eziphambili ezihlalutyiweyo kule ngxelo.
Ingxelo ikwavavanya kwaye ivavanye ifuthe lobhubhane weCovid-19 kumzi mveliso weFibre Glass Mesh, kuthathelwa ingqalelo amathuba anokubakho kunye nemiceli mngeni, izizathu kunye nemingcipheko. Ivavanya ifuthe leCovid-19 kubenzi beFiber Glass Mesh kwaye ibonelele ngoqikelelo lokukhula kweemarike ngokusekwe kwiimeko ezahlukeneyo (ukuqiniseka, ukungabi nathemba, ukuthemba kakhulu, kunokwenzeka njalo, njl.)
Ilaphu leMultiaxial ayisiyo-crimp, ii-axis ezininzi kunye nelaphu lokuqinisa elinemigca emininzi.
Ubume bokubeka, ukuqhelaniswa, ubunzima kunye nomxholo wefayibha yomaleko uyahluka ngokusekwe kumgca wemveliso kunye nokusetyenziswa. Amacwecwe athungwe ngentambo ye-polyester.
Amalaphu anokuveliswa kusetyenziswa ii-axis ezininzi (0 °, 90 °, + 45 °, -45 °) okanye zidityaniswe ne-mat eqholiweyo kunye nemaleko amaninzi esigqubuthelo kunye / okanye izinto ezingalukwanga.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwamalaphu e-multiaxial ngamandla omoya, elwandle okanye yokwakha iinqanawa, ulonwabo okanye iimveliso zolonwabo, iimoto, i-aerospace kunye nokuzikhusela.
Umaleko omnye okanye amanqwanqwa aliqela okusahlula abekwe paralle. Imaleko yokuhamba ingafakwa kumacala ahlukeneyo ngokuxinana okungafaniyo, emva koko ithungiwe ngomsonto we-terylene. Elaphu elinolwakhiwo lweMesh yiMultiaxial Fabric ebizwa ngokufutshane ngokuba yi-MWK. Iyahambelana ne-UP, Vinylester kunye ne-Epoxy njl.
Imveliso isetyenziswa ngokubanzi kumandla omoya, kumzi-mveliso wesikhephe, kwiimoto, kwindiza, kwindawo kunye nakwezemidlalo. Iimveliso zokuphela eziphambili zibandakanya i-blasdes yomoya, i-FRP isikhephe, isikhephe semoto ngaphandle, izixhobo zokuhamba ngenqwelomoya kunye neemveliso zesithuba njl.
Ukufakwa ngaphandle kweDonga
Ukwakha ukungenwa kwamanzi
Ifayibha yeglasi yophahla izicubu zeMat zisetyenziswa kakhulu njengezinto ezibalaseleyo zokuphahla ubungqina bamanzi. Lubonakala ngamandla eqine eliphezulu, nokumelana, kunye soakage lula ngebhitumene njalo njalo. Amandla endawo kunye nokuxhathisa kweenyembezi kunokuphuculwa ngakumbi ngokubandakanya ukuqiniswa kwizihlunu kububanzi bayo bonke. Izicubu zophahla ezinobungqina bamanzi ezenziwe zezi ziqwengana akukho lula ukuba ziqhekeke, ziguge kwaye zibole. Ezinye izinto eziluncedo ezinophahla lwengca eluphahla lwamanzi zinamandla aphezulu, ukufana okugqwesileyo, ubunjani bemozulu obulungileyo, kunye nokumelana nokuvuza.
Umgangatho weglasi we-FRP umphezulu unokusasazeka kwefayibha, umphezulu ogudileyo, ukuthamba kwesandla, imixholo ephantsi yokubopha, ukumiswa kwentlaka ngokukhawuleza kunye nokuthobela okuhle komngundo okwenza ukuba isebenze ngakumbi kwezinye iinkqubo zokubumba ze-FRP njengokushicilela, ukutshiza, icentrufugal ojikelezayo sukube.
I-1.C yeglasi yeglasi esetyenziswe kumatshini okanye ekusebenzeni okuqhubekayo kokuncamathisela isandla esenziwe ngeemveliso ze-fiberglass (i-FRP), ipleyiti, umbhobho, umjelo, iinkonkxa, iizikethi, iimveliso zebhabhu.
2.E-iglasi fiberglass waziva esetyenziselwa epoxy obhityileyo emva IINKCUKACHA kunye neemveliso usambathisa zombane.
3.Iglasi yefayibha yeglasi encinci yaziva isetyenziswa kwibhetri yokuzahlula, uphahla lokungangenwa ngamanzi, iplastibhodi yiphaneli, umgangatho weplastiki kunye nombhobho wamachiza ogcwele ukuvuza, izixhobo zomgangatho wokumelana.
Ukwakha A, Zijingguandi, Qiaodong District, Xingtai City, kwiPhondo Hebei